ShortyCoin စျေး - အွန်လိုင်း SHORTY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ShortyCoin (SHORTY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ShortyCoin (SHORTY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ShortyCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $826 788.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ShortyCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ShortyCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ShortyCoinSHORTY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0123ShortyCoinSHORTY သို့ ယူရိုEUR€0.0104ShortyCoinSHORTY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0094ShortyCoinSHORTY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0112ShortyCoinSHORTY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.109ShortyCoinSHORTY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0773ShortyCoinSHORTY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.271ShortyCoinSHORTY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0457ShortyCoinSHORTY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0163ShortyCoinSHORTY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0171ShortyCoinSHORTY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.27ShortyCoinSHORTY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0953ShortyCoinSHORTY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0667ShortyCoinSHORTY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.92ShortyCoinSHORTY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.08ShortyCoinSHORTY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0169ShortyCoinSHORTY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0188ShortyCoinSHORTY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.383ShortyCoinSHORTY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0855ShortyCoinSHORTY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.31ShortyCoinSHORTY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩14.6ShortyCoinSHORTY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.75ShortyCoinSHORTY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.896ShortyCoinSHORTY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.336
ShortyCoinSHORTY သို့ BitcoinBTC0.000001 ShortyCoinSHORTY သို့ EthereumETH0.00003 ShortyCoinSHORTY သို့ LitecoinLTC0.000226 ShortyCoinSHORTY သို့ DigitalCashDASH0.000135 ShortyCoinSHORTY သို့ MoneroXMR0.000138 ShortyCoinSHORTY သို့ NxtNXT0.959 ShortyCoinSHORTY သို့ Ethereum ClassicETC0.00181 ShortyCoinSHORTY သို့ DogecoinDOGE3.55 ShortyCoinSHORTY သို့ ZCashZEC0.000149 ShortyCoinSHORTY သို့ BitsharesBTS0.379 ShortyCoinSHORTY သို့ DigiByteDGB0.393 ShortyCoinSHORTY သို့ RippleXRP0.0437 ShortyCoinSHORTY သို့ BitcoinDarkBTCD0.000424 ShortyCoinSHORTY သို့ PeerCoinPPC0.0408 ShortyCoinSHORTY သို့ CraigsCoinCRAIG5.6 ShortyCoinSHORTY သို့ BitstakeXBS0.524 ShortyCoinSHORTY သို့ PayCoinXPY0.215 ShortyCoinSHORTY သို့ ProsperCoinPRC1.54 ShortyCoinSHORTY သို့ YbCoinYBC0.000007 ShortyCoinSHORTY သို့ DarkKushDANK3.95 ShortyCoinSHORTY သို့ GiveCoinGIVE26.64 ShortyCoinSHORTY သို့ KoboCoinKOBO2.8 ShortyCoinSHORTY သို့ DarkTokenDT0.0113 ShortyCoinSHORTY သို့ CETUS CoinCETI35.52